Xog: Gaari Qarax ah Oo Ku Soo Socday Muqdisho Oo Ku Qarxay Ceelasha Biyaha. – Hornafrik Media Network
Gaari Noociisu yahay Toyota Noah ayaa ku qarxay inta u dhaxay Muqdisho iyo Afgooye, xilli uu ku soo jeeday Magaaladda Muqdisho, Siday HornAfrik u xaqiijiyeen Saraakiisha Amnigu.
Gaarigan ayaa la xaqiijiyay inuu ku soo wajahnaa Magaaalada Muqdisho, iyadoona uu jiro shaki ah inay xiriir lahaayeen Gaariga kale ee ku qarxay Agagaarka Hotel Karmel, kaas oo qarxay wax yar kadib markii uu Gaariga Noah-da ah ku qarxay Ceelasha Biyaha, xilli ay istaajiyeen Ciidanka Dowladdu.
inta la hubo 4 Qof ayaa ku dhimatay Qaraxaasi oo mid ka mida uu yahay Ismiidaamiyaha, Mana Cadda inay iyagu qarxiyeen Gaariga iyo inay jirto cid kale oo meel hagaysay oo qarxisay markii ay ogaadeen in la qabtay.
Qaraxa Ceelasha iyo kan Karmel ayaa imaanaya wax ka yar Usbuuc markii Gaari Xamuul ah oo Qarax laga soo buuxiyay lagu weeraray Isgoyska Soobe ee Muqdisho, halkaasoo ay ku dhinteen in ka badan 300 Rayid ah, 400 kalana ku dhaawacmeen, kaasoo ah Qarixii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca Somalia iyo Caalamka, kadib 11 September Qaraxyaddii Maraykanka ee lagu weeraray Daarihii Mataanaha ahaa ee Newyork.
Gaari lagu dhajiyay Miino oo ku qarxay Degmadda Hodan ee Muqdisho.